दिल्लीको ‘खतरनाक’ वायु नेपाल भित्रिएला? – Health Post Nepal
दिल्लीको ‘खतरनाक’ वायु नेपाल भित्रिएला?
चिसो बढेसँगै वायुमण्डलमा प्रदुषण जम्मा हुने क्रम सुरू भइसकेको छ। तर शुक्रबार भने भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदुषण निकै खतरनाक विन्दुमा पुगेको थियो।
नेपालमा पनि चिसो बढ्न थालिसकेको छ। र योसँगै आकाश पनि धुम्म परेको देखिन्छ। तर मौसमविदहरूले यसलाई वायु प्रदुषण वा मौसम खराब भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। वायुमण्डल केही धुम्मिए पनि अहिले काठमाडौं लगायत देशभरको मौसम भने सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ले जनाएको छ।
शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका धेरै ठाउँहरूमा हावाको गुणवेत्ता (पिएम २.५) ५०० भन्दा माथि पुगेको थियो। यो निकै खतरनाक विन्दु हो र यसले सिधै मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्छ।
खासगरी दीपावलीका बेला भारतमा व्यापकमात्रामा पटाकाहरू पड्काइन्छ। त्यसले आकाश धुँवामय हुनजान्छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पटाका पट्काउन प्रतिबन्ध त लगाइएको छ तर पनि मानिसहरूले दीपावली मनाउँदा त्यहाँ व्यापक मात्रामा पटाका तथा आतिसवाजी गरेका थिए। नेपालमा पनि त्यो प्रचलन छ। तर प्रहरी प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएका कारण लुकिछिपि त्यसको प्रयोग भइरहेको छ।
शुक्रबारदेखि नै दिल्लीमा मानिसहरूमा आँखा पोल्ने र घाँटी चिलाउने समस्याले सताउन थालेको छ। वायु प्रदुषण भएका कारण सहरभरि तुँवालो फिँजिएको थियो। र त्यस्तो सडकमा सवारी दुर्घटनाहरू पनि बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
दिल्लीको त्यो प्रदुषित वायुको प्रभाव तराईका केही सहरहरूमा पनि देखिन थालेको छ। शुक्रबार तराईका केही स्थानहरूमा आकाश धुम्मिएको थियो।
तर त्यो वायु अहिले नै नेपालमा आइनसक्ने मौसमविदहरूले जनाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार हिँउद सुरू भइसकेका कारणा धेरै हावा नचल्ने र पानी पनि नपर्ने यो मौसममा वायुमण्डल केही फोहर हुन भनेसक्छ।
‘यो समय पनि त्यस्तै हो। जति जति तापक्रम घट्दै जान्छ उति नै वायुमण्डल धुम्म पर्ने हुनसक्छ’ मौसमविद वरूण पौडेल भन्छन् ‘दिल्लीको त्यो प्रदुषित हावा अहिले नै नेपालमा आइपुग्ने भन्ने हुँदैन। उसै पनि नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहन्छ। तर यो अवधिमा अब वायु प्रदुषण भने बढ्दै जान्छ।’
गत वर्ष पनि नेपालका काठमाडौंलगायत धेरै सहरहरूमा वायु प्रदुषणको मात्रा निकै खतरनाक विन्दुमा पुगेको थियो। काठमाडौं सहर दिउँसै अँध्यारोजस्तो भएको थियो र आँखा पिरो हुनेजस्ता समस्याले मानिस पिरोलिएका थिए।
शनिबार बिहान पनि भक्तपुर, जनकपुर, चितवनको भरतपुर तथा पोखरालगायतका सहरहरूमा वायु प्रदुषणको मात्रा केही बढेको देखिएको छ। पूर्वको विराटनगर तथा पश्चिमको धनगढी क्षेत्रमा भने वायु प्रदुषणको अवस्था निकै बढेको छ। बन तथा वातावरण विभागको ‘एयर क्वालिटी मोनिटरिङ’ इन्डेक्समा विराटनगरमा प्रदुषण २.५पिएमको मात्रा १८० र धनगढीको १६० भन्दा धेरै देखाइरहेको छ।
सामान्यतया शून्यदेखि ५० सम्मको मात्रा राम्रो र ५१ र १०० बीचमा मात्रा सन्तोषजनक मानिन्छ। तर समग्र नेपालको वायु प्रदुषणको मात्रा भने अहिले औसतमा छ।
भारतमा आइतबारपछि मात्रै वायुको गुणस्तरमा सुधार हुनसक्ने आंकलन त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। संसारमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदुषित हुने देशमध्य भारत पहिलो नम्बरमा पर्छ। संसारका धेरै प्रदूषित ३० सहरमध्ये २२ वटा भारतमा रहेका छन्।
भारतका प्रदूषित वायुका कारण बर्सेनि १० लाख मानिसको मृत्यु हुने त्यहाँका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष दिल्लीमा पीएम २.५ को हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मात्रा रेकर्ड गरिएको थियो जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सीमा भनी निर्धारण गरेको भन्दा १४ गुणा बढी थियो।